Surprisingly, Paras Khadka has resigned from the post of captain of the Nepali cricket team. He said he had resigned from his post as captain to make it easier for the newly elected CAN to resign. After agreeing to the post of captain, Khadka spoke openly with the media. | Neplays.com
आश्चर्यजनक तरिकाले नेपाली क्रिकेट टिमको कप्तान पदबाट पारस खड्काले राजीनामा दिएका छन् । उनले राजीनामा गर्दा नयाँ निर्वाचित क्यानलाई काम गर्न सजिलो होस भनेर आफूले कप्तान पदबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । कप्तान पदबाट राजीमा दिएपछि मिडियासँग खड्काले यसरी खुलेर कुरा राखे ।
मैले कप्तानी पद सम्हालेको पनि १० वर्ष भइसकेको छ । म आफै पनि नेपाली क्रिकेटको निलम्बन फुकुवा कहिले हुन्छ भनेर कुरेर बसेको थिए । हिजो मात्रै नेपाल क्रिकेट संघको निलम्बन फुकुवा भएको छ । हिजो मात्रै आईसीबाट सार्वजनिक भएको निर्णयले हामी सबै क्रिकेट समर्थक खेलाडी र नेपाली खेलकुद प्रेमीहरु खुशी भएका छौं । अब नयाँ क्याप्टेन को बन्छ भन्ने कुरामा मेरो वास्ता हुँदैन । म कप्तान हुँदा पनि तपाई क्याप्टेन बन्दै हुनुहुन्छ तयार हुनुस भनेर त्यतिबेला पनि भनिएको थिएन । २००९ मा मलाई क्रिकेट संघले कप्तानको जिम्मेवारी दियो र मैले इमान्दारिता पूर्वक जिम्मेवारीलाई पुरा गर्ने कोशिस गरे ।
अब नेपाली क्रिकेट टिमको कप्तान जो बने पनि नेपाली क्रिकेटको जीत हुनु पर्छ । नेपाली क्रिकेटले अहिलेसम्म जुन उपलब्धि हासिल गरेको छ त्यसमा खेलाडी र प्रशिक्षकको ठूलो भूमिका छ । म कप्तान भएकै कारण नेपाली क्रिकेटले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको पनि होइन र म कप्तानबाट हट्दैमा यो उपलब्धि गुम्छ भन्ने पनि छैन् । यहाँसम्म आइपुग्न सम्पूर्ण खेलाडी र प्रशिक्षकको ठूलो भूमिका छ ।
क्रिकेट भनेको हामी सबैको हो भन्ने सोँचका साथ हामी अगाडी बढौं । आशा छ आगामी दिनमा नेपाल क्रिकेटले अझँ बढी सफलता हासिल गरोस । अबको नेतृत्वले नेपाली क्रिकेटलाई राम्रो बनाउने सोँच लिने हो भने अहिलेको भन्दा अझ राम्रो अवस्थामा नेपाली क्रिकेट पुग्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
सबै खेलाडीको साथ र सहयोगका कारण म एकदमै सन्तुष्ट छु । नेपाली क्रिकेट यहाँसम्म आइपुग्नुमा प्रशिक्षकको खेलाडीको ठूलो साथ र सहयोग छ । प्रशिक्षक लुक रोय डासदेखि उमेश पट्वालसम्मलाई धन्यावाद दिन चाहन्छु । तीन जना विदेशी र एक जना स्वदेशी प्रशिक्षक जगत गुरुको ठूलो योगदान छ । हामी सबैको एउटै सोँच थियो जसरी भए पनि नेपाल क्रिकेटलाई माथि पुर्याउने । यो सोँच सबै ठाउँबाट एकमुष्ट रुपमा शक्तिको रुपमा अगाडी बढ्दा हामी यहाँसम्म आइपुग्यौं ।
म कप्तान बन्छु भनेर सपना पनि देखेको थिएन । यू १५, १७, १९ खेल्दै जब राष्ट्रिय टिमबाट खेल्दा समेत कप्तान बन्छु जस्तो लागेको थिएन । तर भाग्यले राष्ट्रिय टिमको नेतृत्व गर्ने मौका पनि पाए । यसप्रति म आभारी छु ।
अब नेपाली क्रिकेटलाई माथि लैजानका लागि खेलाडीको महेनतले मात्रै पुग्दैन । अब आशा गरौं जो जो व्यक्तिहरु जिम्मेवारीका लागि तयार भएर आउनु भएको छ उहाँहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहुने छ ।
टिम हारेर वा जितेर मैदानमा घोषणा गर्ने कुरा मैले कहिल्यै पनि सोँचेको थिएन । रिटायर्डमेन्ट त अझै नभनौं । मेरो जिम्मेवारी भनेको जहिले पनि कसरी नेपाललाई जिताउने भन्नेमा नै केन्द्रीत थियो । हामी पनि निलम्बन कहिले फुकुवा हुन्छ भनेर बसेका थियौं । हिजो मात्र निलम्बन फुकुवा भएको छ । हिजो राति पनि मैले मेरा नजिकका मान्छेसँग सल्लाह गरे र अन्त्यमा मैले राजीनामा दिने निर्णय गरेको हुँ । क्रिकेटको बारेमा मैले कसैसँग पनि सम्झौता गर्न सक्दिन ।
मैले सधैं देशका लागि क्रिकेट खेल्ने हो । त्यसैले मैले उपयुक्त समयमा राजीनामा दिएको छु । अहिले क्यानको नयाँ नेतृत्व आएको छ । उहाँहरुसँग नयाँ कप्तान छान्ने जिम्मेवारी पनि रहेको छ । आगामी दिनमा खेलाडीको रुपमा छानिए भने पक्कै पनि नेपालका लागि राम्रो क्रिकेट खेल्ने प्रयास गर्ने छु । मलाई मिडियाले पनि राम्रो साथ दिएका छन् । नेपाली क्रिकेटको वेस भनेको उमेर समूह हो । त्यसलाई राम्रो बनाउँदै हामी गयौं भने टेस्ट नेशनबन्न धेरै समय लाग्दैन ।
क्रिकेट त खेल्नु हुन्छ नी ?
म अझै क्रिकेट खेल्छु । सन्यास लिएको होइन । कप्तान मात्रै छाडेको हो । विगत तीन वर्षदेखि कप्तान, सेलक्टर मेन्टर भएर पनि काम गरे । जसबाट अब मैले ब्रेकमात्र लिएको हो । अहिले क्यानको नेतृत्व आएको छ । अब खेलाडी छनोट समिति बन्छ, प्रशिक्षकहरु आउनुहुन्छ उहाँहरुले निर्णय गरेपछि मेरो भूमिका तय हुन्छ ।
मेरो उहाँहरुसँग कुरा पनि भएको छैन । यहाँ निर्वाचन हुने बेला हामी सिंगापुर सिरिजमा व्यस्त थियौं । हामी एउटा व्यक्तिमा नअड्कियौं । अब क्रिकेट संघले खेल र खेलाडीलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।